BitGo iji nweta n'ụzọ zuru ezu usoro obi ụlọ ọrụ na n'elu $ 12b ke akụ
BitGo, a ndú na digital ego nche ngwọta maka institutional investors, mara ọkwa na ọ bataworo a definitive nkwekọrịta iji nweta Alaeze Trust Company, a South Dakota – n'ụzọ zuru ezu usoro obi ụlọ ọrụ na n'elu $12 ijeri na akụ. Azụmahịa bụ ka nọ n'okpuru omenala mmechi ọnọdụ na usoro iwu nkwado.
"Global ego ahịa agụụ ike njedebe-na-ọgwụgwụ ngwọta àjà ma na technology ka e meere digital ego nakwa dị ka iwu na nnabata akara dị mkpa iwekota n'ime mainstream ego portfolios"
Alaeze Trust osobo niile na ọdabara chọrọ nke Maka Ụtụ Code 408 ije ozi dị ka a ruru eru mụta iwu ka kọwaa Investment Ndụmọdụ Act of 1940. The custodial ọrụ awa ntụkwasị obi ụlọ ọrụ, n'akụkụ BitGo si digital ego nche nchedo software, ga-eme ka jikọtara ụlọ ọrụ naanị full-tojupụtara, na ọnụ ọgụgụ na-eweta nke onsite na online nchebe maka digital ego investments ẹkenịmde institutional investors.
“BitGo na Alaeze na-ewu ngwaahịa maka ọdịnihu – ịlụ ọhụrụ technology na nchekwa ma na njikwa niile investors achọ.”
Kazakhstan ọnwụnwa na-akwụ ụgwọ okporo ụzọ Iwu na Bitcoin
Kazakhstan na-eme ka o kwe omume ịkwụ ụgwọ okporo ụzọ Iwu na cryptocurrency. The mobile ngwa na ọrụ OKauto.kz esesịn e ọma na-anwale site na otu nke creators nke ngwa – Ali Shaykhislam. Otú ọ dị, na ndị ọrụ mesie na ndị ọhụrụ ọrụ na-ka na-agba ọsọ na ule mode.
The creators nke ghọtara na-ekwe omume nke na-akwụ ụgwọ ọchịchị Iwu maka imebi okporo ụzọ iwu na cryptocurrency nke bitcoin.
Nke a bụ a free ngwa nke na-enye a nkwenye ọrụ na Ịma Ọkwa nke Iwu agbala, ihe ndị ọzọ.
Ọ bụ uru arịba ama na ọ dịghị ukara ọnọdụ maka cryptocurrencies na Kazakhstan, ha na-agaghị na-atụle ego ma ego ngwá.
Russian cryptocurrency ụgwọ chọrọ
The Russian Ministry of Finance bipụtara a ụgwọ “On Digital Financial Àgwà”, nke e mere ka yie ndị ziri ezi cryptocurrencies na Russia.
The Ministry of Finance na-ezo aka digital ego akụ dị ka “onwunwe na electronic ụdị, kere iji izo ya ezo (ọgbàràùhie) pụtara.”
Ị nwere ike ịgbanwe tokens ọzọ cryptocurrency ma ọ bụ rubles naanị site pụrụ iche mgbanwe – “mgbanwe rụọ nke digital ego akụ”.
Naanị a iwu kwadoro aha ke Russia, ma na-edebe iwu No. 39-FZ “Na ala ahịa” ma ọ bụ No. 325-FZ “On haziri trades” pụrụ ịghọ ndị dị otú ahụ maka ọrụ.
The usoro maka oghere na ịnọgide na-enwe ihe ndekọ ga-ike site Central Bank.
The regulator chọrọ ịzụ naanị tokens na ụlọ ọrụ na-eji ịkwa ego maka rubles, adọ aka ná ntị ndị Ministry nke Finance.
The ozi na-ekwere na ọ gaghị ekwe omume gbochie na mbụ zuo nke cryptocurrency, n'ihi na uzọ ọzọ illegal azụmahịa uche “aga” a ahịa.
Na-na akwụkwọ e nwere nkọwa nke smart contracts na Ngwuputa, nke a na-ewere entrepreneurial ọrụ n'ihi na ihe e kere eke ma ọ bụ nkwado nke cryptocurrency n'ọnọdụ maka ụgwọ. Gịnị ụtụ isi ga-anakwa ndị eme nke miners, na-akọwapụtaghị.
Ọ bụrụ na akwụkwọ na-aga atọ agụ ke State Duma, na-enweta ihu ọma nke Federation Council na mbinye aka nke Russian president, ọ ga-akwanye 90 ụbọchị mgbe ya Akwụkwọ. The ụgwọ nwere ike emeziri n'oge mkparịta ụka na nzuko omeiwu.
Previous Post:The mgbakọ na mwepụ gbakọọ ego nke bitcoin maka 2018
Next Post:Chainalysis – ụlọ ọrụ na-ebibi ndị anonymity Bitcoin